पाँच-तारे पर्यटक जटिल "Majestic बीच क्लब" (Kemer) - रोमान्टिक सप्ताह र युवा को लागि एक ठूलो ठाउँ। 1987 मा स्थापित, होटल Goynuk को रिसोर्ट गाउँ देखि केही किलोमिटर, Kemer को केन्द्र देखि बस6मी बाट 50 कि .मी एण्टाल्या हवाई अड्डा। विशाल हरियो क्षेत्र मा आरामदायक दुई-तीन-मंजिल्ला विला र एक मुख्य भवन, परम्परागत शैलीमा सजाया बनाए।
यसको अस्तित्व महिनामा गेस्ट हाउस "Majestic बीच क्लब" (Kemer) बारम्बार पुनर्निर्माण र ennobled छ। आज यो एक धनी आन्तरिक पूर्वाधार आरामदायक क्षेत्र छ। पर्खिरहेको मेहमान भू-मध्य सागर मा एक ठहराव, unspoiled प्रकृति घेरिएको, जहाँ मसलाको, सुन्तला र नासपाती रूखहरू वन। होटल आफ्नै भ्रमण एजेन्सी दाँया, जहाँ तपाईं सबै भन्दा कम लागत मा टर्की को ऐतिहासिक साइटहरु एक रोचक र सूचनात्मक भ्रमण बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
दुकानदारों को landscaped क्षेत्र र बाहिर को परिधि वरिपरि केन्द्रित धेरै pavilions पाउनुहुनेछ निजी कार लागि त्यहाँ पार्किङ छ। नृत्य को मजा र प्रशस्त स्थानीय क्लब मा हुन सक्छ। सक्रिय ग्राहकहरु लागि होटल सुविधा र खेल विकल्प को एक पाहुना प्रदान गर्दछ। सानो अतिथि एक अविस्मरणीय पानी खेलकुद, दैनिक एनिमेसन शो र संगीत आनन्द उठाउन सक्छौं।
विभिन्न विभाग को सहज कोठा जटिल "Majestic क्लब Kemer बीच" प्रस्ताव। कोठा को संख्या बारेमा टिप्पणी, ज्यादातर सकारात्मक, धेरै अपार्टमेन्ट को आधुनिक सुविधाहरु र उपकरण उल्लेख गरे। को कोठा को balconies देखि रसीला ट्रपिकल बगैचा वा नीलो समुद्र को एक दृश्य छ।
धूम्रपान मा सुविधाजनक लेआउट बैठक, सुतिरहेको क्षेत्र र स्वच्छ र कस्मेटिक उत्पादनहरु को एक सेट संग एक निजी बाथरूम शामिल। अतिथिहरू: केबल च्यानल, टेलिफोन, वातानुकूलन र मिनीबार संग एलसीडी टिभी।
होटल मा खाद्य अवधारणा "Majestic बीच क्लब" (Kemer)
होटल मा रहन अतिथिहरूको, एक "सबै समावेशी" मा खान्छन्। भाँडा को विकल्प ताजा तरकारी, माछा र मासु, संरक्षित, पूर्वी मिठाई मा वैविध्यपूर्ण र धनी छ। यसलाई5रेस्टुरेन्ट,4बारहरू र इन्टरनेट क्याफे विशेषताहरु।
होटल निर्माण देखि सिर्फ 300 मीटर pebbly र बलौटे तट छ। यसलाई अतिथि सबै स्वाद अनुरूप आवश्यक समुद्र तट उपकरण र पानी गतिविधिहरूको प्रशस्त प्रदान गर्दछ। जो कोहीले प्रकृति को सुन्दरता को प्रशंसा, पानी को सतह मा एक catamaran सवारी भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ।
खेलाडीहरूलाई एक रोचक शो कार्यक्रम र विभिन्न प्रतियोगिताहरु संग होटल "Majestic बीच क्लब" (Kemer), रात मनोरञ्जन मा पर्खिरहेका छन्। आधुनिक उपकरण संग एक जिम। एक टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स कोठा, खेल मैदान र मिनी गोल्फ पनि छ।
हरियो ठाउँ को प्रशस्त बीच संग आउटडोर पूल लहरै पानी स्लाइडहरू र समुद्र तट सुविधाहरु। पर्यटकहरू स्पा मा कल्याण उपचार प्रस्ताव छन्। एक सम्मेलन कोठा र भोज सुविधाहरु - सभा, वार्ता र विभिन्न घटनाहरू लागि। ध्यान दिएर र राम्रो-शिक्षित स्टाफ उत्सव आयोजना मदत गर्न खुसी हुनेछन्।
युवा पर्यटकहरु खेल मैदान लागि। विभिन्न उमेर र खोक्रो पूल को बच्चाहरु को लागि एक विकास क्लब हो। आमाबाबुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सम्भालना सेवा। यस दिन मा एनिमेटरहरु को एक पेशेवर समूह चलिरहेको।
राष्ट्रिय पहिचान, आधुनिक युरोपेली रुझान र पूर्वाधार प्रसिद्ध क्लब जटिल "Majestic क्लब Kemer बीच" संग। टर्की ग्राहकहरु न्यानो Subtropical जलवायु, नीलो समुद्र र सफा तटों, सारा आउँदै वर्षको लागि positivity र राम्रो मुड को छुट्टी वर्तमान लहर प्रसन्न गर्न विफल हुन सक्दैन।
विमानस्थलमा Vnukovo होटल "चालक" नजिकै होटल (दुई तारा)
कम्पनी "CA": ठूलो र सानोको लागि प्रीमियम कपडा
सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा एक समीक्षा: इन्धन-कुशल बिजुली हीटर को एक नयाँ पुस्ता
एक महिला अनुहार दाढी निर्णय भने के हुन्छ?
आई एस Turgenev "हिजो": एक सारांश। "को पूर्वसन्ध्या मा" Turgenev छ: सृष्टिको इतिहास विश्लेषण
पेट मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड: समारोह र अर्थ
आदर्श सुत्ने ठाँउ: कसरी उच्च खाट राम्रो छ?
को referendum - यो मान्छे को प्रत्यक्ष इच्छा को एक कार्य हो